Firefox သေတော့မည်မဟုတ်ပါ Linux မှ
အလက်ဇန်းဒါး (ခေါ် KZKG ^ ဂါရာ) | | applications များ, GNU / Linux များ, NOTICIAS, အခြား
ယခုရာနှင့်ချီသောဘလော့ဂ်များသည်သတင်းကိုပဲ့တင်ထပ်နေပါသည် Google နဲ့သူ့ရဲ့စာချုပ်ကိုပိတ်လိုက်တယ် Mozilla ကနှင့်အာရုံကြောဟောင်းအမျိုးသမီးများကဲ့သို့သူတို့သည်အလျင်စလိုကောက်ချက်ချရန်အပူတပြင်းပြေး။ ငါဟာဗေဒင်ဆရာမဟုတ်၊ လေ့လာသုံးသပ်သူလည်းမဟုတ်ပေမယ့်အလေးအနက်ထားကြပါစို့ Firefox ကို မင်းသေမှာလား
ကနေဝင်ငွေရဲ့ 80% ကျော် Mozilla က လာသည် Googleဒါပေမယ့်ဘယ်သူမှမြန်မြန်ဆန်ဆန်အဆုံးသတ်သဘောတူညီချက်၏ပြောသော။ ယခုအချိန်အထိ ၀ င်ငွေ၏သိသိသာသာလျှော့ချမှုကိုသာပြောဆိုခဲ့သည်။ ဒီတစ်ခါလည်းသိုလှောင်ထားပြီးဖြစ်သောခွဲတမ်း Chrome ကို ကနေခွဲထုတ်ဘို့အခြေခံအကြောင်းပြချက်ဖြစ်လိမ့်မည် Mozilla ကဒါပေမယ့်ကျနော့်အမြင်အရဆိုရင်တော့ဒါဟာအလွန်လွယ်ကူတဲ့ထွက်ပေါက်၊ ဒါဟာငါ့ကိုသတိပေးတယ် Microsoft က y Apple၎င်းသည်ရန်သူနှင့်မနိုင်လျှင်၎င်းသည်စိတ်ပျက်ဖွယ်မူပိုင်ခွင့်များကိုစတင်ထုတ်လုပ်သည်။ ဟုတ်တယ် Firefox ကို သေသွား Chrome ကို စိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်ခြင်းကိုရပ်တန့်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါပေမယ့်ရဲ့ထင်ကြေးကိုရပ်တန့်ခြင်းနှင့်ရည်မှန်းချက်ဖြစ်ကုန်အံ့။ Mozilla Firefox ကို သူ့မှာနောက်လိုက်တွေအများကြီးရှိပြီးတစ်ရက်မှနောက်တစ်ရက်အထိသေနိုင်တယ်။ Developer များသည်ဘတ်ဂျက်မလုံလောက်မှုကြောင့်စီမံကိန်းမှထွက်ခွာသွားသည့်တိုင်၎င်းသည်အခြားအမည်အောက်ရှိခက်ရင်းမြစ်ဖြစ်သည့်တိုင်၎င်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဆက်လက်ပူးပေါင်းသူများအမြဲတမ်းရှိနေလိမ့်မည် ထိုအကျနော်တို့ဘယ်မှာစွန့်ခွာကြပါဘူး, ချိတ်၏စကားပြော ရေခဲeရေခဲကတ်? ဟုတ်တယ်လို့ဘယ်သူပြောလဲ Firefox ကို ဒီစီမံကိန်းတွေဟာသင်္ချိုင်းဂူထဲကိုရောက်နေပြီလား။
ကောင်းသောအရာတစ်ခုခုရှိပါက ပွင့်လင်းတဲ့အရင်းအမြစ်, အမြဲတမ်းစိတ် ၀ င်စားသူနှင့်ဆက်လက်ပါ ၀ င်ရန်အမြဲတမ်းအမြဲတမ်းရှိနေလိမ့်မည် OpenOffice.org? ကောင်းပြီ၊ အဲဒီမှာမင်းမှာဥပမာကောင်းတစ်ခုရှိတယ်။ LibreOffice ဤမျှလောက်ပိုကောင်းဖြစ်မွေးဖွားခဲ့သည်။ ဒီတစ်ခါလည်းနှင့်ဤအဆင်ပြေသည်။ ဒီတစ်ခါလည်းဖြစ်နိုင်တယ် Firefox ကို တစ် ဦး ထက်ပိုသောအသိုင်းအဝိုင်းထုတ်ကုန်ဖြစ်လာသည်။ ငါဆိုသည်ကား၊ Mozilla မှဖန်တီးခဲ့သော Browser သည်မည်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်မဆိုသေဆုံးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Firefox သေတော့မည်မဟုတ်ပါ
Mozilla Firefox သည်နေ့ချင်းညချင်းသေဆုံးရန်နောက်လိုက်များစွာရှိတတ်သည်
ငါ chrome ကိုပြောင်းလိုက်ပြီ။ ဒါပေမယ့်အရင်းအမြစ်ပြန်ဆိုခြင်းပြwithနာတွေကြောင့်သင်မကြိုက်ဘူး။ တရားဝင် repo နဲ့တည်ငြိမ်တဲ့ဗားရှင်းကိုသိမ်းထားပြီးသင်၏ privacy ကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းကျူးကျော်ခဲ့သည်။
ငါသည်ငါ့ချစ်လှစွာသော iceweasel left ဘယ်တော့မှသင့်တယ် ...
ဒါကြောင့်မင်းမြင်နိုင်တယ် .. ခရိုမီယမ်ကဖောင့်တွေဘယ်လိုပြန်ပြောင်းလဲဆိုတာငါကြိုက်တယ်။
Iron Debian ကဘာလဲ ???
ဟမ် .. ဒါက SRWare Iron …😀
ဟုတ်တယ်၊ MuyLinux အမှန်တရားကိုငါဘာကြောင့်လိုက်နာနေတယ်ဆိုတာတော့မသိဘူး။
ဟားဟား .. ငါ့ကိုမမေးပါနဲ့ ..
ကျွန်ုပ်ကိုယ်ပိုင်ယူထားသည် MuyLinux နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်၏အထူးထင်မြင်ချက်ရှိသည်
ကျွန်ုပ်သည်အလေ့အကျင့်ကောင်းသူတစ် ဦး ပါ။ ကျွန်ုပ်သည် Firefox ကို (၁.၅) ကတည်းကအသုံးပြုခဲ့ပြီး (Chromiun နှင့် Opera) တွင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုပြုခြင်း မှလွဲ၍ မီးမြေခွေးကိုအစဉ်အမြဲအသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ ကိုယ်ကြိုက်တယ်။ ငါစဖွင့်ဖို့အချိန်အနည်းငယ်ပိုကြာတဲ့ငရုတ်ကောင်းတစ်ကောင်ကိုဂရုမစိုက်ပါဘူး၊ စာမျက်နှာများကို ၀.၁၁ ထောင်ထောင်ချီပြီးနောက်ပိုင်းတွင်တင်ပြီးငါ့ကိုနည်းနည်းမှတ်ဥာဏ်သုံးပြီးပျင်းရိစေတဲ့ငရုတ်ကောင်းကိုငါဂရုမစိုက်ဘူး။ ငါပျောက်နေတယ် ငါနေ့တိုင်းအသုံးပြုသော addons များ (firebug, stylish, adblock, flashblock, measureit, Colorzilla ... ) နှင့်ငါ့အတွက်အစားထိုးမရသောအရာများအပြင် Mozilla ၏အတွေးအခေါ်သည်ကျွန်ုပ်နှင့်၎င်းအား ၀ က်ဘ်ဖန်တီးရာတွင်အထောက်အကူပြုသောအရာအားလုံးကကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့သည်။ ပိုမိုလွတ်လပ်သော site (သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးဖြစ်နိုင်သမျှအတိုင်းလွတ်လပ်စွာသိမ်းရန်ကြိုးစားရန်၊ လာမည့်အရာသည်ကြည့်ခြင်းသည်ကြက်ဆင်၏ချွဲမဟုတ်) ။
ဤအရာအလုံးစုံအတွက်ကျွန်ုပ် (နှင့်ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့သောအခြားသူများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်) သည် Firefox / Iceweasel / Icecat အပေါ် ဆက်၍ သစ္စာရှိမည်။
Hahahahaha ဟုတ်တယ်၊ ငါလည်းအဲ့ဒီကနေလာတာပါ။ အမှန်တရားကအလိုရှိရာကိုပိုပြီးလိုချင်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာ MuyLinux ... သူတို့ကကျနော့်အမြင်နဲ့မတူကွဲပြားတဲ့ထင်မြင်ချက်တွေရှိနိုင်တယ်။ ငါလုံးဝလေးစားပါတယ်၊ မှတ်ချက်များနှင့် flamewars အတွက်ကြက်စီးနင်း၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုနှင့်အတူမိုက်မဲသောအရာတို့ကို။ သူတို့ LinuxMint ကိုပေးတဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်မှုက BOCHORNOSO ဖြစ်ပြီးသူတို့ဘယ်နေရာမှာမှသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်။ သင်အခုကြည့်နေတဲ့ရည်ညွှန်းဖြန့်ဖြူးမှု (သို့မဟုတ်ဖြစ်လာနေပုံရ) ဖြစ်သည်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါမကြာခင်သူတို့ကိုငါအကြိုက်ဆုံးနှင့်ငါ၏ feeds တွေကိုမှဖယ်ရှားပစ်မည်ဟုထင်ပါတယ်။ <inLinux တွင်စုစုပေါင်းအလွန် agustito အရမ်းရယ်ရတယ်
ငါပြောခဲ့သလိုပဲ MuyLinux of အပေါ်ငါ့အမြင်ထားရှိသည်
Mint 12 ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရာတွင်စိတ်ကူးမရှိပါ၊ ရိုးသားစွာကျွန်ုပ်မဖတ်ခဲ့ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ဤ distro haha ​​၏ပရိသတ်မဟုတ်ပါ။ ငါဝန်ခံတာကသူတို့ဟာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ဆောင်းပါးအတော်များများကိုထုတ်ဝေခဲ့တယ်၊
ထိုအခါငါအတူတူကဆိုသည်။ ဒါပေမယ့်ငါ RAM ကိုနည်းနည်းသက်သာအောင်လုပ်ရမယ်။ Iceweasel 8 သည်တစ်ခါတစ်ရံ၊ စက္ကန့်တိုင်းကျွန်ုပ်ကိုအေးခဲစေသည်။ ငါမကြိုက်ဘူး ... သို့သော်ဟေး၊ ဤမျှကြီးမားသောစီမံကိန်းသည်သေလိမ့်မည်ဟုမထင်ပါ။
ငါသည်လည်းထပ်တူပင်ဖြစ်သည်ဟုထင်သည်။ ငါ (အခြားနေရာတစ်ခုတွင် elav ပြောခဲ့သည့်အတိုင်း)“ အလေ့အကျင့်တစ်ခု” ... ငါနှစ်ပေါင်းများစွာ Firefox ကိုအသုံးပြုလေ့ရှိပြီး၎င်းသည် (၎င်း၏သီလနှင့်အားနည်းချက်များနှင့်) ကြယ်ပွင့်ဘရောင်ဇာ (ဆက်လက်) 😀
ငါအပြည့်အဝ Nerjamartin compare နှိုင်းယှဉ်
၄ င်းတို့အားလုံးသည် <° Linux ရှိ pts အနည်းငယ်ဖြစ်လျှင် MuyLinux အတွက်စိတ်မကောင်းပါ။
မင်းက MuyUbuntu လို့ပြောရင်ရမယ်၊ သူတို့ MuyLinux လို့မခေါ်သင့်ဘူး
မင်္ဂလာပါရဲ။ ငါ့့ဘလော့ဂ်ရဲ့အစစ်အမှန်နာမည်က MuyUbuntu ဖြစ်သင့်တယ်ဆိုတာကိုရည်ညွှန်းပြီးအထက်ပါမှတ်ချက်တစ်ခုထဲထည့်လိုက်ရုံပဲ။ ဒါပေမယ့်သူတို့ထင်မြင်ချက်ကိုမပြောပဲနေသင့်တယ်ထင်တယ်၊ ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့တရားဝင်အယ်ဒီတာတွေ (သို့) စေတနာ့ ၀ န်ထမ်းတချို့ (Descelinux) ကိုနောက်ပိုင်းမှာ Desdelinux ကိုဆန့်ကျင်တဲ့အရာတခုခုပေါ်လာလိမ့်မယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့သူတို့ဟာဂရုစိုက်စရာမလိုပါဘူး။ ငါက
ကောင်းပြီ၊ ဒါပေမယ့်သူတို့ကိုဝေဖန်ဖို့ငါ Loquendo ကငါ့ဘလော့ဂ်ဟောင်းမှာပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးပြီ
Firefox သေလိမ့်မယ်မထင်ပါဘူး။ ပိုပြီးဆိုးလာတယ်။
ငါပြောခဲ့တာက "FireFox4နှင့် FF 8 အကြားခြားနားချက်ကိုကျွန်ုပ်မတွေ့နိုင်ပါ" လို့ပြောတာပါ။ စွမ်းဆောင်ရည်၊ မှတ်ဉာဏ်သုံးစွဲမှု၊
အခြားတစ်ဖက်တွင်, အခြား browser များအများကြီးတိုးတက်လာသည်။
ဥပမာ - Opera ။ ။ တိုးတက်လာသည်။ ဒီဇိုင်းသည်ဆွဲဆောင်မှုရှိသည်။
ဂူဂဲလ်ခရုမ်း - မြန်ဆန်ပြီးမြန်ဆန်တဲ့၊ နည်းနည်းလေးပိုပြီးကျွမ်းကျင်တဲ့အနာဂတ်ဗားရှင်းတွေအတွက်ဖော်ရွေမှုရှိတယ်။
Safari နဲ့ IE တွေကငါ့ကိုမယုံကြည်ကြဘူး။
Mozah သည်သေသည်မဟုတ်။ Firefox ကိုနောက်ထပ်စုံတွဲနှစ်နှစ်လောက်အွန်လိုင်းမှာကြည့်နေတုန်းပါ။ ၎င်း၏ဆက်စပ်ပစ္စည်းများစွာသည်ချက်ချင်းပင်အလွန့်အလွန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်မြန်ဆန်ပြီး၎င်းတို့ကိုလူများကဲ့သို့သောသူတို့၏အချိန်ကိုအကျိုးရှိရှိအသုံးချတတ်သူများ (သို့) Bookmarks bar ရှိသည့်အရသာရှိသည့်အခြားအဖွဲ့အစည်းများကပြုလုပ်သည်။ ပြောတာက forks တွေအတွက် (အခု Iceweasel ကိုကျွန်တော်သွားခဲ့တယ်)
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရကျွန်ုပ်သည် Chrome နှင့် Chromium ကိုနှစ်သက်မှုမရှိသောကြောင့် (သို့သော်ကျွန်ုပ်တွင်ဒေါသထွက်နေသောငှက်များအတွက် xD ထက်ပိုသော xD မရှိခြင်း) ကိုတိတိကျကျမနှစ်သက်ပါ။ ၎င်းသည် Debian အတွေးအခေါ်နှင့်မကိုက်ညီသောကြောင့်မြေခွေးသို့မပြန်ပါ။ ငါ Midori ကိုအခွင့်အရေးတစ်ခုပေးချင်တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါဟာ YouTube ကိုငါ့ရင်ခွင်ပေါ်ကနေသေစေနိုင်ခဲ့တယ်။ ဒါကတော့အလုပ်မလုပ်တော့ဘူး။
ငါပြောတာက Mozilla ဟာကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခုအနေနဲ့ SO မကြာခင်သေမှာမဟုတ်ဘူး၊ တစ်ခြားသူကရန်ပုံငွေထောက်ပံ့မယ်။ ထိုနှင့်အတူ Firefox ကိုမဟုတ်သလိုအနကျအဓိပ်ပါယျမ။
ကောင်းပြီ ... ငါတကယ်ဂရုမစိုက်ပါဘူး Firefox ကိုအရင်းအမြစ်များစွာစားသုံးရန်နှင့်အချိန်ယူရန်စသောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည် Firefox ကိုရပ်တန့်လိုက်သည်။ ယခုကျွန်ုပ်သည် Opera ကိုစမ်းသပ်နေပြီးအလွန်ကောင်းမွန်နေပါသည်။ ဒုတိယ browser တစ်ခုအနေဖြင့် Google Chrome ကိုအလွန်လျှင်မြန်စွာဖွင့်ပြီးကျွန်ုပ်တွင်ရှိလိမ့်မည်။ ကန်ဖို့ ... ... Google ရဲ့အနိမ့်ဆုံးပါ။ ဒါပေမယ့်ဒါကအရင်းရှင်စျေးကွက်ပါ။ ပြိုင်ဆိုင်မှုကိုနှိမ်နင်းနိုင်ရင်လုပ်ပါ။
Ubuntu ရှိ Gnome-Panel ကိုအစားထိုး SlickPanel